Ukulungiselela okusebenzayo kwemikhumbi yokugoba > Imithi
Imithi yokwelashwa kwe-cerebral arteriosulinosis
I-atherossteosis yobuchopho yisifo semithambo yekhanda, ebonakala ngokwakhiwa kwamapulangwe e-atherosselotic, lesi sifo siyingozi ngoba sicasisa ukukhula kwesifo sohlangothi. Ngenhlanhla, lesi sifo siyelapheka, futhi namhlanje sizofunda ukuthi imiphi imishanguzo yokwelapha isifo sokuqina kwengqondo.
Njengoba ukwazi ukubona, asikho isidingo sokudangala. Amalungiselelo ekwelashwa kwe-atherosclerosis yamakhemikhali kuhloswe ngawo ukuqinisa umzimba, ekwelapheni lesi sifo nasekuvimbeleni izinkinga ezingaba khona.
Izigaba zokwakheka kwama-traffic jams
Esigabeni sokuqala, ukubekwa kwe-cholesterol emithanjeni yobuchopho kuyaqala. Lesi sigaba sibonisa ukwakheka kwamabala nemivimbo esikhumbeni.
Esigabeni sesibili, i-atherossteosis iqala ukuthuthuka. Izicubu ezixhunywayo ziqala ukwakha endaweni yamabala, ukwakheka kukakhokho. Yebo, njengoba ama-neoplasms engazinzile kakhulu, ayohlala aqhuma futhi aqhekeze lapho evalela imikhumbi emincane.
Isigaba sesithathu (sibizwa nangokuthi yi-atherocalcinosis). Kuyabonakala ukuthi usawoti ne-calcium kufakwa emithonjeni yethrafikhi abazokhula ngayo, kancane kancane kuvalwe ngokuphelele lokhu noma lowo mkhumbi.
Lesi sifo sibonisa kanjani?
Ubuhlungu bekhanda obuqhubekayo, obungathuthuka futhi buvame kakhulu futhi buqine, i-tinnitus.
Ukwephulwa kokubusa kosuku. Lokho wukuthi, kunzima impela ukuthi isiguli silale ebusuku futhi futhi akukho lula ukuthi sivuke ekuseni. Futhi ukuvuka ebusuku, ukozela nokukhathala okukhulu ngesikhathi sasemini, amaphupho amabi namanye amaphupho awakhishwa.
Ukucasuka ngokweqile kanye nokudangala kwesiguli kuphela kuholela ekuwohlokeni kwaphakade enhlalakahleni.
Ukukhathazeka (ngisho ne-paranoia eqanjiwe kungenzeka ngenxa yokuthi umoya uthola umoya-mpilo omncane kunangaphambili, othinta kabi umsebenzi wobuchopho wesiguli).
Futhi, inkumbulo engonakalisiwe, ukuhlangana kokunyakaza nokuhamba kancane, futhi ngezinye izikhathi ukukhuluma okungaqondile kungathiwa kungasebenzi kahle kobuchopho.
Njengoba ubona, izimpawu zesifo ziyesabeka futhi zitholakala kalula (yize, ngakolunye uhlangothi, amaphuzu ambalwa wezimpawu angabalwa ngisho nakubantu abaphilile). Ngakho-ke, ekubonakalisweni kokuqala kwesinye sezimpawu ezingenhla, kufanele uthintane nodokotela ngokuphuthumayo ukuze uthole izeluleko nokuqokwa kohlelo lokuqhubeka nokusebenza.
Izinhlobo zesifo i-Atherosclerotic Disease
Eqinisweni, kunohlobo olulodwa kuphela lwalesi sifo - isifo sokuqina kwemithambo yegazi emithanjeni yentamo, kodwa akuyona ingozi kangako kune- "mfowethu" wakudala. Nge-atherosclerosis yentamo, ukuqhekeka kwemithambo ye-carotid kuwuphawu. Lesi sifo siyingozi kulokho, ngoba kungenxa yentamo ukuthi yonke imithambo yemithambo yegazi ethwala igazi, umoya-mpilo nezinye izakhi ezidingida ubuchopho idlula, futhi ngenxa yama-neoplasms, ayavinjwa ngenxa yokuthi, ubuchopho nokusebenza kwezinye izinhlaka zomzimba wethu kuphazamiseka.
Lesi sifo singaba khona ngenxa yokwanda kwe-cholesterol yegazi, okuthi ngemuva kwesikhashana iqale ukufakwa ezindongeni zemithambo yegazi. Lawa madiphozi angabonakala ngenxa yezindawo ezinombala omncane entanyeni, kuthi emva kwesikhashana esithile andise futhi abonakale kakhulu.
Kubalulekile ukwazi: ngeshwa, cishe akunakwenzeka ukubona isifo ekuqaleni, ngoba isigamu sesikhathi esisebenza ngaphandle kwezimpawu, futhi kuphela lapho umkhumbi usebenza kuphela ama-30%, izimpawu zokuqala - kuqala izimpawu.
Ukwelashwa kwalesi sifo kulula: isiguli sinqunyelwe ukudla nemithi, futhi ezimweni ezinzima kakhulu, ukungenelela kokuhlinzwa kuphela okungasindisa impilo yesiguli.
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis yobuchopho, noma ilula, kepha yinde, kubandakanya izigaba eziningana. Okokuqala, isiguli kudingeka sishintshe ngokuphelele indlela yaso yokuphila, siqale ukudla ngendlela efanele futhi sihlukane nemikhuba emibi. Ikakhulu, kusuka:
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa nezinto.
Ngaphansi kokushintsha kwendlela yokuphila kusho ukubandakanyeka kwezemidlalo ezisebenzayo, ngoba indlela yokuphila yokuhlala phansi ingakhulisa isimo sakho.
Isiguli sinconywa ukuhamba emoyeni omusha (ikakhulukazi kusihlwa), isitembu: ukuzivocavoca, ukuqina, ukugijima, ukuhamba, ukubhukuda nokunye.
Kubalulekile ukwazi: yebo, kunzima kunokuba uyeke indlela yangaphambili yokuphila, futhi uyeke imikhuba emibi kakhulu, kodwa lapha udinga ukuzibekela izinto eziza kuqala. Zikhethele ukuthi yini ebaluleke kakhulu kuwe ukwedlula ukubhema, utshwala, ukudla okungenamsoco noma inhloko ekhanyayo nenempilo?
Ukudla okungenamsoco kwe-atherosulinosis kufanele kube ukudla, okunempilo nokulinganiselayo, kuqeda ukudla okungenampilo (ukugaya ngokushesha ama-carbohydrate, iziphuzo ezinoshukela, ukudla okunamafutha nokudla okulula).
Rye noma isinkwa se-bran,
Inyama enamafutha amancane noma eyokudla,
Imikhiqizo yobisi yesikhumba
Amafutha e-Olive (asetshenziselwa amasaladi wokuthambisa).
Itiye eliluhlaza, amanzi.
Ukudla okuvinjelwe kufaka phakathi:
Kwimifino, amazambane kuphela, ngoba iqukethe inani elikhulu lesitashi, futhi njengoba abantu abaningi bazi, igcina amanzi emzimbeni,
Ungadla zonke izithelo ngaphandle kwebhanana (imnandi kakhulu futhi iqukethe i-potassium eningi, engalimaza isimo sesiguli),
Imikhiqizo emnandi neminye ebhaka.
Njengoba ubona, ngokudla okwelaphayo, ukudla kudlalwa kakhulu futhi akunamkhawulo, okusho ukuthi umzimba ngeke uzwe ukushoda okubukhali kwanoma yimuphi umkhiqizo.
Imenyu yokudla ingaqukatha noma yini, isibonelo:
Ungadla ibhulakufesi ngeqanda elibilisiwe izigwaca nge isaladi yemifino bese uphuza konke lokhu ngetiye eliluhlaza ngaphandle koshukela.
Kwasemini, yidla umhluzi wenyama ngezicucu zenkukhu.
Hhayi, kusihlwa ungakujabulela ushizi wekhishi ngezithelo.
Kubalulekile ukwazi: into esemqoka ukuthi uqiniseke ukuthi ukudla okuhlukahlukene, umzimba kumele uthole inani lamavithamini.
Khumbula, umuthi unqunywa kuphela ngudokotela oholayo futhi unikezwa kuphela ngomuthi onikezwe.
Basiza ukunciphisa i-triglycerides. Inkambo yokwelashwa iqukethe izinyanga ezi-1-2 zokusetshenziswa okuqhubekayo.
Isetshenziswa kabanzi ekwelapheni i-atherosulinosis yobuchopho. Zenzelwe futhi ukwehlisa i-triglycerides ne-cholesterol, kanye nokwandisa amazinga amaprotheni, anciphisa ubungozi be-atherossteosis.
Zisetshenziselwa ukunciphisa igazi, okunciphisa ingozi yokuxhuma emithanjeni yobuchopho.
Yakhelwe ukwehlisa umfutho wegazi, osetshenziswa nsuku zonke, ngoba inomphumela wokuqongelelana. Uma ngemuva kokudla isikhathi eside umuthi ukuwuyeka, khona-ke lokhu kungadala ukwanda okukhulu kwengcindezi esigulini (okwandisa umfutho wegazi ophakeme). Kuboshwe nge-atherossteosis, i-tandem enjalo ingadala ukugwazwa, ukukhubazeka, futhi ezimweni ezinzima kakhulu zokufa.
Ibambezela ukumuncwa kwamathumbu kwe-cholesterol. Izinzuzo zalo muthi zifaka ukungabikhona ngokuphelele kwemiphumela emibi.
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis ngomunye umuthi
Amakhambi abantu be-Folk abantu bebelokhu belapha lesi sifo isikhathi eside futhi akumangazi ukuthi ziningi izindlela zokuqeda udoti omgwaqo emikhunjini. Kepha, khumbula ukuthi umuthi wendabuko ungasetshenziswa kuphela njengendlela eyengeziwe yokulwa nokugula, ngoba ayinakukwazi ukuthatha indawo ukwelashwa okugcwele. Kuze kube manje, ezinye izindlela zokwelapha zenzelwe kuphela ukusheshisa inqubo yokuphulukisa nokusiza umzimba ukuba ulwe nalesi sifo.
Uju lungcono ekwelapheni i-atherosclerosis.
Kuyadingeka ukuhlanganisa uju nojusi kalamula ngokulingana okulinganayo. Udinga ukuphuza kanye ngosuku ngesisu esingenalutho.
Kuzosiza ukuqeda lesi sifo ezinyangeni ezimbalwa. Kufanele futhi uthathe umkhiqizo kanye ngosuku ngesisu esingenalutho.
Isivumelwano se-Melissa kusuka ku-atherossteosis.
Izokusindisa ku-tinnitus ecasulayo. UMelissa uyenziwa futhi afakwe kanye ubusuku, bese udakwa usuku lonke.
Imbewu ye-dill ehlanganisiwe izokusindisa kusuka ekhanda nge-atherossteosis.
Kuyadingeka ukuthulula amanzi abilayo ngaphezulu kwesipuni sembewu, yenza futhi uthathe izikhathi ezi-4 ngosuku.
Amaqembu ezidakamizwa ze-arteriosulinosis yamakhaza
Kunezizathu eziningi zokuthuthuka kwe-atherosulinosis - kusuka ekudleni okungajwayelekile kanye nokungasebenzi ngokomzimba kuya ezifweni zamafa kanye nezasemuva. Kodwa-ke, indlela lesi sifo esonakalisa ngayo umzimba, ukwanda okuqhubekayo kwe-cholesterol esezingeni eliphansi egazini. Ngokuhamba kwesikhathi, ukweqisa kwayo kuqala ukulimaza izindonga zemithambo yegazi futhi kubangele ukuguquguquka kwawo, i-sclerosis kanye nokwakheka kwamapothali atheromatous.
Rarulula Cholesterol Ephakeme egazini ngezindlela ezintathu:
Vimbela ukufakwa kwe-cholesterol substrate esiswini.
Ukunciphisa ukubekeka okwakho, i-cholesterol yesibindi, i-cholesterol ngesibindi.
Khulisa futhi usheshise i-excretion (i-excretion) yama-lipids okweqile emzimbeni.
Ngokufanayo, izidakamizwa zihlukaniswe, kuye ngomshini wazo wokusebenza. Ukwelashwa kwezidakamizwa kukhethwa ngokuya nge-pathogenetic chain - lapho isixhumanisi se-lipid metabolism sehlulekile khona, kuyadingeka ukwenza lesi sigaba. Emakethe yethu yezokwelapha, kukhona zombili izidakamizwa eziqondile ze-cholesterol - ama-statins, ama-fibrate, ama-ion-exchange resins, nezidakamizwa zokwelapha okuphoqelekile - ama-antiplatelet agents, amavithamini complexes. Ukwelashwa kanjani ngezidakamizwa - ngendlela yethebhulethi noma ngendlela yemijovo - kunqunywa ngudokotela onguchwepheshe ozoya.
Babhekwa njengeqembu eliphambili lezidakamizwa ekwelapheni isifo sokuqina kwemizwa. Ngokwemvelo yabo yamakhemikhali, bangama-inhibitors we-reductase - ama-enzyme afeza ukuqala kwe-enzymatic kokuguqulwa kwe-cholesterol. Ngakho-ke, zivimbela inqubo yokwenziwa kwayo esibindini. Ngemuva kwenkambo yokwamukelwa, kuyehla ukwehla kwezinga le-cholesterol ephansi ngo-35-55%.
Kukhona Izizukulwane ezi-4 ama-statins ngokuya ngento esebenzayo - i-Simvastatin (Vasilip, Simgal, Simlo), Fluvastatin (Leskol-Forte), Atorvastatin (Liprimar, Torvakard, Atoris), Rosuvastatin (Krestor, Rosulip) ne Pitavastatin (Livazo). Onke angama-ejenti aphumelela kakhulu enzelwe ukwelashwa isikhathi eside kokulimala kobuchopho kwe-atherosulinotic. Ifomu lomthamo wokukhishwa kwama-statin ngamathebulethi kuphela. Kufanele kuthathwe ngokuhamba kwesikhathi, ubude besikhathi bukhethiwe.
Imithi eqhamuka kuleli qembu isetshenziswa kulezo zimo zokwelashwa lapho ukuphambuka okukhulu kuphrofayili ye-lipid kuyisilinganiso sezingxenyana ze-lipoprotein. Noma ngabe inkomba ye-cholesterol ephelele ijwayelekile noma inyuke kancane, kufanele ubheke amazinga ama-lipoprotein, ngoba imiphumela eyingozi emikhunjini yi-LDL ne-VLDL. Kungokwanda kwabo ukuthi ukuqokwa kwama-fibrate kuyeluleka, ngoba indlela yabo yokusebenza iyindlela esheshayo yokusetshenziswa kwe-lipoprotein. Okunye futhi ukuthi izingxenyana eziyingozi ikakhulukazi ziyadedelwa - ukuqina kwazo kuncipha cishe ngo-45%.
Imiphumela eyengeziwe yemali evela eqenjini lama-fibrate ifaka ukuqinisa izindonga zemithambo yobuchopho, ukunciphisa ubungozi be-thrombosis, ukukhulisa amazinga eglue kanye nemiphumela emihle kuma-xanthomas. Le mithi isuselwa ku-fibroic acid. Abaholi bokuqokwa kwezokwelapha nguFenofibrat, Lipantil, Exilip, Clofibrat noLipanor.
Ekwelapheni i-atherossteosis yamakhemikhali, inhlanganisela nama-statins zivame ukusetshenziselwa ukunciphisa imiphumela emibi evela ekugcineni.
Leli yiqembu lezidakamizwa ezithinta isakhi segazi seplatelet. Banciphisa ukuvela kwawo, vimbela i-thrombosis futhi baneqhaza ekuthini i-vasency patency ibe ngcono.
Ngenqubo ye-atherosclerotic emikhunjini yobuchopho, bayovikela isiguli ezingxenyeni ezibucayi ngenxa yokuvela kwesikebhe esikhona. Le mishanguzo elandelayo ingabekwa udokotela: Clopidogrel, Ticagrelor, Aspirin-Cardio, Curantil, Dipyridamole.
Izidakamizwa eziqukethe i-nicotinic acid njengento esebenzayo, zithinta ikakhulukazi uhlobo "lwe-cholesterol" olunobungozi. I-Nicotinic acid yi-Vitamin B3 (aka PP), lapho imithamo emikhulu ingaphazamisa ukuhlanganiswa kokuguqulwa kwama-lipoproteins esibindini. Inomphumela oshesha kunazo zonke izidakamizwa ezokwehlisa i-lipid. Kodwa-ke, lokhu kuyasebenza nasekuphendukeni okungekuhle - kwenzeka kaningi nangokushesha kunama-analogues.
Kodwa-ke, i-nicotinic acid ine-niche yayo ekwelapheni i-arteriomatosis yamakhemikhali. Kubalulekile ukukhumbula umphumela oyisisekelo ngokomzimba wale vithamini - kuthuthukisa izinqubo ze-metabolic ezicutshini, kuthuthukisa ukujikeleza kwegazi nokuthambekela kwemithambo ebuchosheni. Kutholakala ngesimo sesisombululo somjovo we-10 mg / ml.
Ion Ukushintshana iziqu
Leli qembu lifaka izidakamizwa ezifana ne-cholesterol, i-cholesterol, i-cholestyramine ne-kutakaran. Zithinta i-cholesterol iDemo yohlelo lwe-hepatobiliary. Iphuzu labo lokusebenza amathumbu amancane. Bile acid lapho udakwa, aboshwe yile mithi. Ngakho-ke, ama-lipid atholakala ngokudla awangenwa futhi i-cholesterol entsha eyingozi ayakhiwa. Ngaphezu kwalokho, lo mphumela uthinta ikakhulukazi ama-lipoprotein aphansi - aqala ukubhidliza ngokushesha ngenxa yokuntuleka kwamafutha acid.
Amavithamini awusizo kakhulu ekwelapheni izilonda ze-atherosulinotic zemithambo ebuchosheni yi-ascorbic acid ne-tocopherol. Zingasetshenziswa ekwelapheni okuyinkimbinkimbi, ngoba zinomphumela omuhle kuma-metabolism, zithuthukise i-microcirculation, futhi zikhuphule ukuqina kwezindonga ze-artery.
Imithetho yokwelashwa kwezidakamizwa
Ngaphezu kwezidakamizwa ezikhethekile, ekwelashweni okuphumelelayo kwe-arteryosulinosis yamakhorali, kuyadingeka ukunamathela emithethweni eminingana eyamukelwa ngokuvamile. Kufanele ushintshe kakhulu indlela yakho yokuphila. Khipha ukungasebenzi ngokomzimba, yenza imithambo yokuzivocavoca umzimba, ukwelapha ngokuzivocavoca, ukuhamba ngezinyawo kanye neminye imisebenzi yokuzivocavoca umzimba. Isiqinisekiso esibaluleke kakhulu sempumelelo ekudleni okwehlisa i-lipid.
Ukudla kufanele kube nokudla okune-fiber, amavithamini amaningi, izakhi ezizuzisayo nezihlanganisi ezisiza ekuhlanzeni izitsha zobuchopho. Izitsha ezithosiwe, ezibhemayo, ezinosawoti nezinezipayisi zinomkhawulo. Ngemuva kokuya emtholampilo kadokotela, ungashintshanisa ukudla ngokupheka kwabantu ngokwezincomo zakhe.
Ukwelashwa kwe-Hypocholesterol kwemithambo yethambo yobuchopho kuthathe isikhathi eside, kanti kwezinye izikhathi, izidakamizwa kufanele zithathwe impilo yonke. Amaphilisi anqunyelwe ukusetshenziswa kakhulu ngesikhathi sokudla noma ngemuva kokudla kwakho. Akunconywa esiswini esingenalutho, ngoba ngeke kube nomphumela ofanele kusuka kubo.
Izidakamizwa Ezisizayo nezithasiselo zokudla
Ukwelashwa kwe-pathogenetic kukuvumela ukuthi ube nethonya elingafani nethonya lesi sifo, umise izimpawu zalo futhi umise ukuqhubeka. Ngokungangabazeki, leli yiphuzu eliyinhloko kunoma yikuphi ukwelashwa, kepha umuntu akufanele akhohlwe ngokwelashwa okuqinisa okujwayelekile. Ngokuphikisana nesizinda se-atherosclerosis, umzimba wonke uhlupheka kakhulu, ngakho-ke, kudingeka ukuthi usizakale ekubuyiseleni nasekuqhubekeni kwemisebenzi yawo, ukuze ilwe nalesi sifo kanye kanye nemithi.
Nge-atherosulinosis yemithambo ebuchosheni, izidakamizwa ezinjengama-nootropics nama-antioxidants. Kanye nemithi ephambili, bangakha ukwelashwa okusebenzayo kakhulu. Ama-Nootropics (Actovegin, Piracetam) izidakamizwa ezithuthukisa ukujikeleza kwe-cerebral, zinomphumela onenzuzo emsebenzini wengqondo. Ama-antioxidants asiza ukuhlanza imithambo yegazi yama-cholesterol deposits. Izithako zokudla nokuqukethwe kwama-macro- nama-microelements alusizo (i-Gold iodine nabanye) ukuqinisa izindonga zama-capillaries nokusimamisa umfutho wegazi.
I-atherosclerosis yemithambo ye-cerebral yisifo esinamandla esanda ukukhula esingaba nzima ngokushaywa unhlangothi, ukushaya kwenhliziyo noma okunye ukuhlasela kwe-ischemic kwezicubu zobuchopho.
Ukuze ukwelashwa kuphumelele, kanye nokuqalwa kwempilo kuthande, kubalulekile ukukhomba i-pathology ngokushesha futhi uthathe izinyathelo. Ungahlonza bese uthola izincomo ezidingekayo kusuka ku-GP yakho. Ngalesi sifo, indlela enakekela impilo yakho iyisihluthulelo sempilo ende neyanelisa.
Izinhlobo zezidakamizwa zokwelapha i-arteriosulinosis yangaphakathi
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis kufanele kuqalwe kusenesikhathi ukuvikela ukuthuthukiswa kwezinkinga, kubandakanya imivimbo, isifo sokuwohloka komqondo, kanye nokulahleka kwamakhono okuzinakekela. Isiguli kufanele sabelwe ukudla okungafaki amafutha ezilwane. Isisekelo sokwelashwa ukuphathwa kwezidakamizwa. Nge-atherossteosis, amaqembu alandelayo wezidakamizwa asetshenziswa:
ukwehliswa kwe-lipid (ama-statins, i-fibrate),
imikhiqizo ye-nicotinic acid
ion exchange sequestators,
Izidakamizwa ze-Statin zehlisa i-cholesterol cishe ngama-40-60%. Njengomphumela wale nqubo, ukwakheka kwamathafa e-atherosulinotic kunciphisa kakhulu. Ama-statins alandelayo ajwayele ukusetshenziswa ukwelapha i-arteryosulinosis yangaphakathi:
Atoris. Umuthi osebenzayo yi-atorvastatin. Le ngxenye ivimbela umsebenzi we-enzyme ye-HMG-CoA reductase, ebopha ukuphindaphinda kwe-cholesterol kwangoko. Intengo - 550 k. amaphilisi angu-30. Ama-Analogs yiLiprimar, Atorvok. Zisuselwa ku-atorvastatin.
UMertenyl. Kuqukethe i-rosuvastatin - into esebenza ngendlela efanayo ne-atorvastatin, i.e., yehlisa inani le-cholesterol. Lo mphumela ubangelwa ukuvimbela kwe-enzyme, okuguqula i-HMG-CoA reductase ibe yi-mevalonate. IMertenil iphinde inyuse izinga lama-lipoprotein aphezulu kwabantu - i-cholesterol enhle. Izindleko zephakethe lamathebhulethi angama-30 ngu-460-500 p.
I-Zokor. Into esebenzayo yi-simvastatin. I-metabolite yayo eyenziwe ngesikhathi se-hydrolysis ivimbela isenzo sokunciphisa kabusha kwe-HMG-CoA. Ngenxa yalokho, amazinga we-cholesterol ayancipha emzimbeni. Inani lama-lipid ku-plasma lincipha cishe emavikini amabili ngemuva kokuqala kokuphatha. Izindleko zamathebhulethi angama-28 zingama-350 p.
Ukulungiselela okuvela eqenjini lama-fibrate kutholakala kwe-fibroic acid. Zingesibili ezaziwa kakhulu ekwelapheni i-arteryosulinosis yecerebral. Umphumela oyinhloko wokuthatha i-fibrate ukukhuphuka kwezinga lama-lipoproteins aphezulu (high-density lipoproteins (HDL)) kanye nokwehla kwe-triglycerides. Le mishanguzo ibalulekile ku-atherossteosis, ngoba lesi sifo kwesinye isikhathi sihambisana hhayi ne-cholesterol ephakeme kuphela, kodwa futhi ne-triglyceridemia. Kulesi simo, ama-statins nama-fibrate ahlanganisiwe. Kokugcina, nge-atherossteosis, zivame ukusetshenziswa:
Isilo. Ine-fenofibrate, into esehlisela i-triglycerides egazini futhi, ngokweqile, i-cholesterol. Ngaphezu kwalokho, le ngxenye inyusa inani le-HDL. Ukusebenza kwesenzo se-Exlip akuqondakali ngokuphelele. Intengo yamathebulethi angama-30 icishe ibe ngu-500 p.
Fenofibrate. Kuqukethe into efanayo esebenzayo. I-Fenofibrate isebenzisa ama-alpha receptors, ithuthukisa i-lipolysis yama-lipoprotein e-atherogenic. Njengomphumela wokuthatha lo muthi wokwelapha i-arteryosulinosis yamakhorali, ingxenyana ye-HDL inyuka namazinga e-LDL ancipha. Inani lama-triglycerides lehla ngo-40-55%, cholesterol - ngo-20-25%. Izindleko zamathebhulethi angama-30 ngu-450 p.
I-Lipanor. Isithako esisebenzayo kulo muthi yi-ciprofibrate. Umuthi uphazamisa ukwakheka kwe-mevalonic acid, okuwuphakathi nendawo ekwakhiweni kwama-steroid. I-Ciprofibrate futhi ithuthukisa ukuqhekeka kwe-cholesterol esibindini futhi ikhuphule ukuphuma kwayo nge-bile. Intengo yeLipanor icishe ibe ngu-30 p.
Ukulungiselela kweNicotinic acid
Vitamin B3 (PP) - lena yi-nicotinic acid. Idlala indima ebalulekile kwinqubo yokudla kwamafutha. Umphumela oyinhloko we-nicotinic acid ukwehlisa i-cholesterol. Ngaphezu kwalokho, isusa ubuthi, iqeda ukuvuvukala, isheshise imitha yokudla emzimbeni, futhi inciphise nemithambo yegazi. Le mithi elandelayo isuselwa ku-nicotinic acid:
Nikoshpan. Ngaphezu kwe-nicotinic acid, kufaka phakathi i-drotaverine. Ngenxa yalokhu kuhlanganiswa, umuthi unomphumela onenzuzo ekwakhekeni kwamafutha egazini, unomphumela we-antispasmodic kwimisipha ebushelelezi. Intengo - 180-200 k.
Acipimox. Ibizwe yingxenye efanayo. I-Acipimox yinto eseduze nesakhiwo sayo samakhemikhali ku-nicotinic acid. Isenzo esiyinhloko ukwenziwa kwe-lipoprotein lipase kwezicubu ze-adipose. Ngaphezu kwalokho, lo muthi usheshisa i-catabolism ye-LDL. Izindleko - 400-500 p.
INicofuranose. Lokhu kukhishwa kwe-nicotinic acid, okunomphumela ofanayo, kepha ukwahlulela ngezibuyekezo, kubekezelelwa kangcono yiziguli. Umuthi unciphisa ukukhiqizwa kwe-LDL. Izindleko zomkhiqizo zingama-200 p.
Leli ngelinye iqembu lezidakamizwa ekwelapheni i-arteriosulinosis yamakhaza, esebenza ngokuqondile imbangela yalesi sifo. Izidakamizwa ze-Hypolipidic zinciphisa i-cholesterol yegazi futhi zilawule inani le-LDL ne-HDL. Izibonelo zezidakamizwa ezinjalo zokwelashwa kwe-atherossteosis:
Lipostable. Inama-phospholipids abalulekile, enza ukuthi kube ngokwejwayelekile ukugcwala kwama-lipoprotein egazini. Ngenxa yalokhu, bamba kangcono i-cholesterol ye-atherogenic, ebangela i-atherosclerosis. Izindleko - 4800-6000 p.
Ezetrol. Kubandakanya ezetimibe - into eyenziwe ngaphakathi emathunjini. Lapho, lesi sakhi asivumeli i-cholesterol ukuthi inyanyekwe. Ngenxa yalokho, ikhishwa emzimbeni kanye nezindunduma. Izindleko - 1900-2200 k.
I-Omacor. Ukwakheka kufaka i-omega-3-triglycerides. Banciphisa izinga lamandla amancane kakhulu we-lipoprotein, okwehlisa inani lama-triglycerides. Ngaphezu kwalokho, isidakamizwa sikhulisa kancane isikhathi sokubumbana. Intengo - 1700-2000 p.
Izidakamizwa ezinjalo ze-arteryosulinosis yamakhorali azinciphisi kuphela ukuqina kwegazi, kodwa futhi zithuthukisa nokuqothuka kwe-microcircon embhedeni we-vascular. Ngokulashwa kwe-anticoagulant yesifo esinjalo, ubungozi bokushaywa yisifo sinciphile. Ukuthatha le mishanguzo, kubalulekile ukubheka isimo sakho. Uma kwenzeka kunezimpawu zokopha kwangaphakathi, yeka ukuthatha bese uthintana nodokotela. Izimpawu ezethusayo ukuhlanza ngegazi, ukulimala emzimbeni, izicubu ezimnyama. Izibonelo zama-anticoagulants:
I-Dicumarin. Ibizwa ngokuthi ingxenye efanayo ekwakhiweni. Kuyindlela yokulwa nezenzo ezingaqondile. I-Dicumarin ye-atherossteosis isetshenziselwa ukubambezela ukuvela kwegazi. Ngokungafani nama-anticoagulants aqondile, i-Dicumarin yenziwe yasebenza kuphela lapho ingeniswa emzimbeni. Intengo - 200 k.
I-Fenilin. Kufaka i-phenindione - i-anticoagulant engaqondile. Le nto iphazamisa ukwakhiwa kwe-prothrombin esibindini, kunciphisa inani lezinto ezihlanganayo. Intengo yamathebulethi angama-20 ngu-90 p.
IHeparin. Kuqukethe i-sodium heparin. Inqanda umsebenzi wezinto ezithile zokuhlangana. Uma isetshenziswa ekugxiliseni okuphezulu, umuthi uvimbela umsebenzi we-thrombin. Izindleko - 360-500 p.
Amavithamini kanye Nezimbiwa
I-atherossteosis yemithambo ye-cerebral yisifo esingalapheki esingalapheki ngokuphelele. I-Therapy ngokumelene nayo ihloselwe ukuvimbela ukwakheka kwama-plaque amasha nokuqinisa izindonga ze-vascular. Lesi sakamuva sitholwa ngokuthatha ama-vitamin-mineral complexes. Ukwelashwa kwe-atherosclerosis, kufanele kufake: